ကျွန်ုပ်သြဂုတ်လအတွက်ကျွန်ုပ်၏ horoscope ကဘာလဲ။ - သြဂုတ်လ
ကျွန်ုပ်သြဂုတ်လအတွက်ကျွန်ုပ်၏ horoscope ကဘာလဲ။
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - သြဂုတ်လက Short Horoscopes
မှမွေးဖွားသောသူတို့အဘို့သြဂုတ်လ1st မှသြဂုတ်လ22nd, သူတို့ကလီယိုရာသီခွင်ဆိုင်းဘုတ်များအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုအရှိဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုအနေဖြင့်လီယိုသည်ရာသီဥတုအရှိဆုံးကြယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မွေးဖွားသူများသြဂုတ်လ23 မှသြဂုတ်လ31st မှာအပျိုကညာ၏အသင်းဝင်များဖြစ်သည်။
သင်မွေးဖွားသည့်လကသင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြသည့်အရာများကအပြန်အလှန်ဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များဇန်နဝါရီလတွင်မွေးဖွားသောဇန်နဝါရီလကလေးများသည်ကြီးပြင်းလာသည့်အခါခေါင်းမာ။ ခိုင်မာတောင့်တကြသည်ဟုဇန်န ၀ ါရီလတွင်မွေးဖွားသည့်အခါရည်မှန်းချက်ကြီးကြသည်။ အခြားသူများအကြောင်းလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့လာခြင်းဇန်နဝါရီလကလေးများသည်အခြားသူများအားမိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်ကူညီလိုသောဆန္ဒပြင်းပြကြသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာမွေးဖွားလာရင်ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာသူတို့ဟာအနုပညာနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေကအရမ်းမတ်တတ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမွေးဖွားသူတွေဟာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်သူတွေဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခါတလေပုန်ကန်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့နဲ့တကယ်ထိတွေ့နေတယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သူတို့လိုချင်တာကိုသိပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလကလေးများသည်ရံဖန်ရံခါရန်လိုတတ်ကြသော်လည်းမတ်လတွင်မွေးဖွားသောလူများသည်မတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည့်အခါများသောအားဖြင့်ပိုမိုကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံလေ့ရှိတတ်သည် မတ်လကမွေးဖွားသူတွေဟာယုံကြည်စိတ်ချရလောက်အောင်လုပ်ကြတယ်။ ဒီယုံကြည်မှုပြတ်တောက်သွားတဲ့အထိလောင်းကြေးတွေအားလုံးကမှန်ပါတယ်။ မတ်လကလေးတွေကလူတိုင်းနီးပါးကိုသဘောကျတယ်။ လူတိုင်းကိုသွားလာစေချင်တယ် Aprilပြီလမှပြီလတွင်ကလေးများသည်အားကစားနှင့်အားကစားများဖြစ်လေ့ရှိပြီးinပြီလရှိသူများနှင့်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ သူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာအာရုံကိုမွေးဖွားလာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာဖွေသူများဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက် adrenaline အလုအယက်ရှာဖွေနေကြလို့ပါပဲ။ babပြီလကကလေးတွေကများသောအားဖြင့်အိပ်ရာအာလူးများမဟုတ်ကြပါဘူး။ Aprilပြီလမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဘ ၀ မှာလှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက် ဦး နှောက်ကိုသူတို့ရဲ့ညာဘက် ဦး နှောက်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုခြင်းဟာဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ ဆိုလိုတာကသင်ဟာနံပါတ်များနှင့်အချက်အလက်များထက်သင်ဟာပိုပြီးယုတ္တိရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ သင်အိပ်နေစဉ်မှာအိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီး၊ မေလမှာမွေးဖွားခဲ့ရင်အနာဂတ်အတွက်လည်းပါ။ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းယုတ္တိဗေဒကို သုံး၍ ညတွင်ကြီးမားသောအိပ်မက်ကိုမက်သည်။ ဇွန်လဇွန်လကလေးငယ်များသည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်ဇွန်လတွင်မွေးဖွားလာသူကိုစိတ်ဆိုးရန်များစွာမလိုပါ၊ သို့သော်သူတို့အလွန်ယဉ်ကျေးသောဇွန်လတွင်မွေးဖွားလာသူတစ် ဦး ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောကြောင့်လူတို့သည်မကြာခဏနားထောင်ကြသည် သူတို့ကိုနှင့်သူတို့အလေးအနက်ထားသူတို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုယူပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဇွန်လကလေးဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့တူညီသောအရာမျိုးကိုနှစ်သက်လိုလျှင်၊ အခြားသူများကိုဘေးဖယ်ထားလိုလျှင်၊ သင်သည်ဂျူလိုင်လတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသူနှင့်အမြဲတမ်းပြည့်နေလိမ့်မည်။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထွက်ကြည့်ပါ၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုမင်းနဲ့စကားပြောစေပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုခုပြောပါ၊ သြဂုတ်သြဂုတ်လမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သြဂုတ်လမှာမွေးဖွားလာမယ်ဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာဖို့စက္ကန့်လောက်ပဲကြာလိမ့်မယ်။ မွေးဖွားသည့်အလုပ်အမှုဆောင်သြဂုတ်လသြဂုတ်လကလေးများသည်စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များတွင်ရှင်သန်ရန်ဤခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ စက်တင်ဘာစက်တင်ဘာကလေးများသည်အလွန်အသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့လျှင်သင်သည်ပြည့်ဝစုံလင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ စီးပွားရေး၌ပါ ၀ င်သည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ၌ပါ ၀ င်သူများစက်တင်ဘာကလေးများသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအလွန်မျှော်လင့်ထားကြသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပျက်လျှင်စက်တင်ဘာလအလွန်လျှင်မြန်စွာဝေဖန်ခံရလိမ့်မည်။ အလွန်အမင်းလွတ်လပ်ပြီးလွတ်လပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါကသင်သည်တောက်ပသောဘက်ကိုကြည့်ရှုသောအခါမကြာခဏကောင်းမွန်စွာမမြင်နိုင်ပါ၊ ထို့နောက်အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသူများစွာကိုရှာရန်ကြိုးစားရမည် အောက်တိုဘာကကလေးတွေကပျော်စရာကောင်းပြီးစကားပြောတတ်ကြလို့သူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှပပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။ နိုဝင်ဘာလမှာသင်မွေးဖွားလာရင်နိုဝင်ဘာလမှာမွေးဖွားမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလကမင်းအကြောင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်နိုဝင်ဘာကလေးတွေကများသောအားဖြင့်အရမ်းခေါင်းမာပြီးအလွန် လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ထားရမယ်၊ နို ၀ င်ဘာလကလေးကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့အခါမကောင်းဘူး။ ကြီးမြတ်မှုအတွက်အလားအလာ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားပါကသင်သည်အလွန်ပါးနပ်သော၊ မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောနိုဝင်ဘာကလေးများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်ကြီးပြင်းလာနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလကလေးများဖြစ်လိုလျှင်သာပျော်စရာကောင်းသည်။ သူတို့သည်လူအများနှင့်ပြည့်နေသည့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ရှိနေသည့်အခါသူတို့သည်သင့်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ wer ဒီဇင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသည်။ သင်သည်အိမ်တွင်တက်ကြွစွာထိုင်ပြီးသင်၏လက်ဖက်ရည်မဟုတ်သောတီဗွီကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလကကလေးများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားမည်သည့်အရာကမှမတားဆီးရန်ကျွန်ုပ်မလိုလားပါ။ ribe တစ်ခုခုမှကန့်သတ်ထားသောကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုရယူပါ
နက္ခတ်ဗေဒင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆိုသနည်း။
၂၀၂၀ သြဂုတ်လီယို၊ အားလပ်ရက်၊ ပျော်ရွှင်စရာရာသီဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်သြဂုတ်လပါသင်ကဲ့သို့ Cardinal နှင့်အရေးယူ - ထုပ်ပိုးအဖြစ်လုပ်နိုင်ရပါတယ် Aries မှ Mars သည် Capricorn ရှိ BIG3Jupiter, Pluto နှင့် Saturn တို့ကိုတစ်လလုံးလုံးရင်ပြင်သည်သြဂုတ်လ!၁ ။ 2020 ။
ဘယ်လောက်ပဲသိပ္ပံပညာဘယ်လောက်ပဲဝင်သွားပါစေသူတို့မှာတူညီတဲ့တစုံတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်ငြင်းဆိုသည်။ ငါတို့အားလုံးသူတို့သိပြီးသားဖြစ်သည်။ Aquarius သည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသို့အုပ်စုတစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်လီယိုသည်ကိုယ်ပိုင်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကိုထောက်ခံသည် အသိဥာဏ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်လူစုလူဝေးထဲမှ ထွက်၍ အချို့ခေါင်းဆောင်များနေရာတွင်ပါဝင်ရမည်ဟုသင်သိသော်လည်းဤလတွင်ဤနက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာရှေးဟောင်းသုတေသနနှစ်ခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ မင်းဟာမင်းဖြစ်ဖို့မကြောက်ကြဘူး၊ ဒီနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုကိုသင်ဘယ်လောက်နိူင်ငံရေးအမှတ်အသားဖြစ်စေ၊ Aquarius လပြည့်ကဒီစွမ်းအင်ကိုရှင်သန်စေပြီးသင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုပြတဲ့နေရာမှာမင်းကိုကြောက်ဖို့မကြောက်တဲ့ဘုရင်ကြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လတာကာလအတွင်း၊ ငါတို့အားလုံးအတွက်အများကြီးပါပဲ။ ဒါဆိုမင်းတို့မျိုးနွယ်ထဲကို ၀ င်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းစတဲ့လီလအသစ်ကိုပေါ်လာစေဖို့သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုမီအောင်လိုက်ပါ။ နှင့်အနာဂတ်အတွက်မျိုးစေ့များကိုကြဲလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာအားလုံးကိုဇီဇာကြောင်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်တတ်အောင်သင်ယူပါ။ ၊ ပန်းသီးကတ်၏သော့သည်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိလာသည်။ ထို့ကြောင့်ယခုလဖွဲ့စည်းပုံအချို့သည်သင့်အားစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးသင်ပြောလိုသည့်ဆန္ဒရှိသည်။ အနည်းငယ်သောအရာများသည်တစ်ခါတစ်ရံပါရမီရှင်သည်ဤအခိုက်အတန့်၌မွေးဖွားလာသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုစွန့်ခွာလာခြင်းကြောင့်အနည်းငယ်မျှတနေသည့်အခြားသူများကိုအနည်းငယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်သာမကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုက်နာရန်အခြေအနေရှိသည်။ ဒါ့အပြင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကိုစစ်မှန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၊ သင်သိတဲ့အတိုင်းမိန့်ခွန်းပြောခြင်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှအင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်လီယိုအချိန်၌နေနှင့်မာကျူရီသည်သင်၏အကျိုးအတွက်သင်၏နှစ်သိမ့်မှုပန်းတိုင်များနှင့်အတူသင့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဂြိုလ်တွေဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့အပျိုစင်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ငါ Sun Mercury ကိုပြောမယ်၊ ငါတို့ကဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုအားလုံးကိုအသုံးချပြီးတစ်လကုန်ဆုံးတဲ့အခါလွင့်ထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးခွဲထုတ်နိုင်တယ်။ Venus သည်နူးညံ့။ အာဟာရရှိသောကင်ဆာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ်မနာလိုမှုခဏရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိကြောင်းသင်သိသည်၊ သြဂုတ်လကုန်ဆုံးသွားသောသင်သိရသည့်သက်တောင့်သက်သာများ၏ခံစားချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများသည်လည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ သူတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများပွင့်လင်းသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Aries တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ရှိပါကသြဂုတ်လတွင်သင်သည်ချစ်သူရည်းစားနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုပြီးအိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်ကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် သတ်မှုသို့မဟုတ်လ သငျသညျသငျ့လျြောသောဂရုစိုကျမှုတစျခုဖွစျ။ Taurus Venus ဖြစ်ပြီးစိတ်ရှုပ်စေသောခံစားချက်များကိုပေးသောအခါတစ်နှစ်ပတ်လုံးလျှာဖြင့်ပျားရည်ကဲ့သို့သင်၏လျှာကိုလျှောချပစ်လိုက်ခြင်းနှင့် Venus ကိုသတိရခြင်းသည်သင်၏အုပ်ချုပ်သောဂြိုလ်ဖြစ်သည်။ သင်၏မင်း Mercury သည်ယခုလတွင်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းအခြေအနေမှာအမြော်အမြင်ရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပြီးသင့်ပါးစပ်ဘယ်မှာရှိသလဲ၊ သင့်အတွက်ကင်ဆာမှာရှိတဲ့ Venus Cancer ကသင့်ကိုအိပ်မက်မက်စေတဲ့လတစ်ချောင်းကိုပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလဆန်းကိုသင်ရွေးချယ်သူမည်သူမဆိုသည်ပိုမိုလိုအပ်ချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြင့်ကူညီလိမ့်မည် ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခြင်းသည်ယခုလသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်သစ်နှင့်တူသောကြောင့်သင်၏ခြေထောက်သည်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလမ်းပြနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်မေးခွန်းကဘာလဲ၊ အပျိုစင်မွေးနေ့ကိုသင်မည်သည့်အရာကိုရွေးချယ်သည်၊ လာမည့်နှစ်တွင်သင်ထင်ရှားပြလိုသည့်အရေးကြီးသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူသင်၏ဘဝပုံစံကိုသင်၏ဘ ၀ ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် Libra နံပါတ်တစ်အဖြစ်ကမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူဆောင်လာမည်ကိုသင်သိသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယခုလတွင် esso ဟုခေါ်ဆိုပါကလာမည့်လတွင်သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဤကျက်သရေကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်အတွက် Scorpio တိုးတက်ရန်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ Uranus သည်သင်၏ကတိကဝတ်ပြုမှုနယ်မြေတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ တွယ်ကပ်ခြင်းဒဏ်ရာဟောင်းများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်နှလုံးအခြေအနေများမှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အသက်ရှူရန်အချိန်ယူပြီး Sagittarius ၏ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုသည်ယခုလတွင်သင့်အပေါ်၌တည်ရှိနေသည့်လွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားရန်သတိရပြီးအသစ်တစ်ခုကိုသင်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာခံစားရသည်ကိုသတိရပါ။ အကယ်၍ မင်းကမေးခွန်းထုတ်လိုပါကလသည်လသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တံခါးကိုဖွင့်သည်။ သင်တို့အတွက် Capricorn ဖြစ်သည် Venus သည်သင်၏ရှည်လျားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဇုံထဲသို့ဝင်နေသည်။ သင်အိပ်မက်မက်နေသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်၏ပျော့ပျောင်းသောဘေးကိုမကြိုးစားပါနှင့်။ ဖုံးကွယ်ရန်၊ ရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမက Aquarius ဤအချိန်တွင်သင်တို့အဘို့မှတ်။ သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတွင်လပြည့်သည်သင်၌ယခုနှစ်မည်မျှရှိသည်၊ အထွေထွေဆက်နွယ်မှုများနှင့်ယခုလသည်အမှန်တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအခွင့်အလမ်းပေးပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင်၏ရေရှည်ဇုန်တွင် Venus နှင့်သင်၏ချိန်းတွေ့ခြင်းတွင် Venus ကဲ့သို့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်မျှအထိချစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သင်သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ သို့မဟုတ်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တွေ့ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဆွေမျိုးများကိုသင်၏ ဦး စားပေးမှုအဖြစ်ထားခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဆွေမျိုးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမျှဝေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်နောင်လာမည့်အရာများကိုစစ်ဆေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
လီယို၏ဆောင်ပုဒ်မှာငါလိုချင်တယ်။ အဆိုပါ horoscope ဇယားတွင်, လီယိုဂြိုလ်သို့မဟုတ်အိမ်သူအိမ်သားမှမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ထင်ရှားတဲ့ဇာတ်ကောင်ဆောင်တတ်၏။
အိပ်မက်ထဲကမဖတ်သင့်တဲ့ 'War and Peace'၊ တီမို၊ ကြွေးကြော်သံ၊ သင်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်လိုမျိုးပေါ့။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ။ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသည်ရှည်လျားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သမိုင်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်တွေ့ရမည့်အထင်ရှားဆုံးနှင့်လက်တွေ့ကျသောဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူပါရှိသည်။ အကယ်၍ အရှည်ကသင့်ကိုခြိမ်းခြောက်လျှင် Tolstoy မည်မျှဆင်းရဲသည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
၁၈၆၃ တွင်ဆိုက်ဘေးရီးယားရှိပြည်နှင်ဒဏ်မှပြန်လာသောနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများအကြောင်းဝတ္ထုတိုရေးသားခဲ့သည်။ ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည်စာမျက်နှာ ၁၂၀၀ ရှိသောအချစ်ဇာတ်လမ်း၊ စစ်မြေပြင်၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခြင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးရူပါရုံများ၊ မော်စကိုမြို့မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်ဝက်ဝံတစ်ဝက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သော်လည်းပြည်ပနှင့်နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများမရှိခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
Tolstoy တစ် ဦး သည် Vulcan ဝိဇ္ဇာကို ၁၈၂၈ တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောမျိုးရိုးဗီဇအဆက်ဆက်မိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင်ကာဇန်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစွန့်စားကာစစ်တပ်ထဲ ၀ င်ခဲ့သည်၊ ဥရောပကိုဖြတ်ပြီးခရီးသွားလာ။ ထို့နောက်သူသည်သူ၏အိမ်ကြီးဖြစ်သော Yasnaya Polyana တွင်အခြေချကာ Decembrists ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ မွေးဖွားပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀ အကြာ ၁၈၅၆ တွင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သည့်ကောင်းစွာမွေးဖွားသောတော်လှန်ရေးသမားအုပ်စုတစုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် Tolstoy ကသူပုံပြင်ကိုဘယ်လိုပြောပြနိုင်မလဲ။ သူတို့ကွန်ဆာဗေးတစ် Tsar Nicholas I ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သည့် ၁၈၂၅ ခုနှစ်၏ပုံပြင်ကိုမပြောဘဲပြည်ပမှပြန်လာသည့် Decembrists of? နပိုလီယံ၏ရုရှားကိုကျူးကျော်မှုသည် Decembrist များပုန်ကန်ခဲ့သောအာဏာရှင်စနစ်ကိုနှိုးဆွပေးသည့် ၁၈၁၂ ခုနှစ်၏ဇာတ်လမ်းကိုမပြောပြဘဲသူမည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။ ၁၈၈၅ အကြောင်းမပြောဘဲ ၁၈၁၂ အကြောင်းရုရှားလူမျိုးများကနပိုလီယံ Austerlitz တိုက်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးသိရှိခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူသည် ၁၈၁၂ ၏ဇာတ်လမ်းကိုမည်သို့ပြောပြနိုင်မည်နည်း။ ဒါကြောင့်တော်စတွိုင်းကသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်များနဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်များကိုနေထိုင်ခဲ့သည့်သေးငယ်တဲ့ဘ ၀ လေးအကြောင်းရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ သူသိသမျှအထက်တန်းလွှာများ၊ သူသိသမျှအတန်းအစားများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်သည်ရံဖန်ရံခါတောင်သူလယ်သမားများနှင့်တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သောတောင်သူလယ်သမားများနှင့်တောင်သူလယ်သမားများနေထိုင်ရာပြည်ပိုင်ရှင်များကိုအစေခံရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၏ဘဝများကိုရံဖန်ရံခါသာဖော်ပြသည်။ 'စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး' ပြင်သစ်နှင့်ရုရှားအကြားစစ်ပွဲအကြိုတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ကော့တေးပါတီမှမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များသည်အကြမ်းဖက်မှု၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမကျေနပ်ကြပါ၊ သို့သော်ဘာသာရပ်သည်မင်းဂရုစိုက်ရမည့်အရာများဖြစ်သောပိုက်ဆံ၊ လိင်နှင့်သေခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤပထမ ဦး ဆုံးမြင်ကွင်းသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြားခုန်ပျံကျော်လွှားနေသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုပြသသည်။ 'War and Peace' တွင်အဓိကဇာတ်ကောင်များမရှိပါ။ “ စာဖတ်သူများသည်ကျယ်ပြန့်။ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်မေးခွန်းများသို့ဝင်ရောက်ကြသည်။
တရားမ ၀ င်သောတရားမဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သားသည်လှပပြီးလှည့်စားတတ်သောမင်းသမီးနှင့်လက်ထပ်မည်လော။ သူ၏တစ် ဦး တည်းသောမိတ်ဆွေသည်သြစတြီးယားစစ်မြေပြင်၌ရှင်သန်နိုင်မည်လော။ နှစ် ဦး စလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာယောက်ျား? အစစ်အမှန်သမိုင်းဝင်ဇာတ်ကောင်များသည်ဒီစိတ်ကူးယဉ်သူများနှင့်ရောနှောနေပြီးနပိုလီယံသည်အကြိမ်များစွာတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးတော်စတွိုင်း၏ဘိုးဘေးတစ် ဦး ပင်နောက်ခံအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဇာတ်ကောင်များနှင့်သူတို့၏စိတ်ပညာများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေသော်လည်း Tolstoy သည်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိုးထွင်းသိမြင်သောမေးခွန်းများမေးရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြတ်တောက်ရန်မကြောက်ပါ။ ဘာကြောင့်စစ်တွေစတာလဲ။ စစ်မြေပြင်နည်းဗျူဟာတွေကဘာတွေလဲ။ နပိုလီယန်လိုလူကြီးတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်တိုင်းပြည်တွေကထပြီးကျသွားတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးအင်အားတွေပိုများလာသလား။ ဤရှည်လျားသောဖိနှိပ်မှုများသည် 'စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး' ကိုမြင်ကွင်းကျယ်စေသည်။
သို့သော် ၁၉ ရာစုဝေဖန်ရေးသမားအချို့အတွက်မူ“ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး” သည် ၀ တ္ထုတစ်ပုဒ်မဟုတ်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဟင်နရီဂျိမ်းစ်၏စကားတွင်၎င်းသည်ကြီးမားပြီးလျော့ရဲရဲသောနဂါးကြီးဖြစ်သည်။ Tolstoy ပင်သဘောတူညီခဲ့သည်။
သူ့အတွက်တော့ဝတ္ထုသည်အနောက်ဥရောပဖြစ်သည်။ ရုရှားစာရေးဆရာများသည်ကွဲပြားခြားနားစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသောကြောင့်မတူကွဲပြားစွာရေးသားခဲ့ရသည်။ 'စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး' ဆိုတာဘာလဲ။ '?' သူမေးတယ် 'ဒါဟာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူး။
မော်ကွန်း၏တောင်မှလျော့နည်း။ တောင်မှလျော့နည်းသမိုင်းရာဇဝင်။ စာရေးသူက 'စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး' ကိုဖော်ပြသည့်ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြလိုသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် Tolstoy ၏စုစုပေါင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။
'War and Peace' ပြီးဆုံးသောအခါ Tolstoy သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုနားလည်ရန်ရေးသားရန်မျှော်လင့်သောအဖြစ်အပျက်များမတိုင်မှီ ၃၆ နှစ်အလိုတွင်၊ Tolstoy သည်သူ၏ဇာတ်ကောင်များကို ၁၈၂၀ သို့ယူဆောင်လာသည်။ သူသည်သူ့နောက်ကွယ်မှစုပုံထားသည့်နှစ်များတွင်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ရလဒ်မှာသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ပညာနှင့်စစ်အပေါ်လူသားတို့၏တုန့်ပြန်မှုများကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
အများဆုံး #Leosဖြစ်ကြသည်။။ လူများစွာသည်မိမိတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းသူတို့သိသောကြောင့်သူတို့သည်အထီးကျန်မှုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ လူအများကဤအပြုအမူကိုလူမဆန်သောလူမှုရေး၊ အမှန်တရားကတော့သူတို့မထိခိုက်စေချင်ဘူး။၃၀ 2020 ။
ဤအကြောင်းကြောင့်ခြင်္သေ့များကိုဘုရင်နှင့်မိဖုရားတို့ဟုခေါ်ကြသည်။ ဒါဆိုဘာကြောင့်ခြင်္သေ့ကိုထူးခြားတာလဲ။ ကောင်းပြီရှာကြည့်ရအောင် သူငယ်ချင်းများစက်ဝိုင်းတွင်ဤ Diva အမြဲရှိသည်။
Diva သည်အာရုံကိုနှစ်သက်ပြီးကြယ်တစ်လုံးကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူဖြစ်သည်။ ခြင်္သေ့များသတိပြုမိခံရဖို့ကိုချစ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ကြသည်။
အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများထက်အနည်းငယ်ပိုလိုချင်ကြသည်။ ပြဇာတ်ရုံသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်စင်မြင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ဘ ၀ သည်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြင်္သေ့နှင့်ပတ်သက်လျှင်သူတို့သည်ကမ္ဘာ၏ဗဟိုဖြစ်ချင်ကြသည်။
သင်သည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်း၏ဗဟိုဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်မတော်တဆမဟုတ်ပါ။ သငျသညျလညျးအလွန်သြဇာဖြစ်ကြသည်။ လီယိုအတော်များများသည်အနည်းဆုံးအားစိုက်ထုတ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်ညှိနှိုင်းခြင်း၌လည်းကောင်းပြီးတိုက်ခိုက်မှုများကိုလွယ်ကူစွာဖြိုခွဲနိုင်သည်။ လီယိုသည်အလွန်သစ္စာစောင့်သိသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေမှာတစ်ခုခုရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်။
သူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့နည်းလမ်းမရှိရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။ Taurus နည်းတူလီယိုသည်တည်မြဲသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးအလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီးနိုင်သည်။ မကြာခဏကြိမ်, သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်, ခြင်္သေ့စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲတစ်ခုခုသို့အလျင်အမြန်
ဒါကသူတို့အမှောင်နှစ်ဖက်ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုလိုချင်ပါက၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေလျှင်ပင်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်သူတို့အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘဲသင့်ဘက်၌ရှိခြင်းသည်အမြဲတမ်းအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါရာသီခွင်၏ခြင်္သေ့နှင့်ခြင်္သေ့လည်း ဦး ဆောင်အဖွဲ့များမှာကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကအသံကျယ် သူတစ်ပါး၏ကြားနာခြင်းကိုသူတို့အတွက်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ ရာသီခွင်လက္ခဏာများသည်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်အာရုံစူးစိုက်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ လီယိုသည်ရက်ရောကာသဘောထားကြီးမှုရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကသူငယ်ချင်းအများကြီးရှိချင်ကြတယ်။
တကယ်တော့သူတို့ကဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်သဘာဝအလျောက်ပေါက်ဖွားလာပြီးပေါင်းသင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုမကြာခဏခံစားရလေ့ရှိသည်။ Gemini နှင့် Cancer ကဲ့သို့ Leos သည်အထီးကျန်မှုကိုမကြိုက်ပါ။
၎င်းသည်အခြားနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုနှင့်အလားတူဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိသော်လည်း။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုအလွယ်တကူခါးသီးစေ။ စိတ်ပျက်စေသည်။ လီယိုသည်လူများကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူတို့သည်တန်ဖိုးထားမှု၊ ဝေဖန်မှုနှင့်ယေဘုယျတုံ့ပြန်ချက်များကိုနှစ်သက်ကြသည်။
သူတို့သည်အလွန်ပွင့်လင်းပြီးအသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားလိုကြသည်။ သူတို့ကအကအခုန်ခြင်း၊ အခြေခံအားဖြင့်လီယိုသည်သူ၏အတ္တကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးသူ့အားစိတ်ချမ်းသာစေနိုင်သည့်အရာမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အတ္တအကြောင်းပြောရရင်လီယိုသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူတို့သည်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်း။ ကြင်နာတတ်သူများဖြစ်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သူတို့ကိုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ယုံကြည်ချက်ကိုမှားယှငျးဖို့ဘာမှမလုပ်ကြဘူး။
ယုံကြည်မှုများအကြောင်းပြောရလျှင်လီယိုသည်ယုံကြည်မှုစနစ်အလွန်အရေးကြီးသော Pisces နှင့်အတူနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာရေးလော၊ သို့မဟုတ်ဘဝအတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤသင်နေထိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်သင့်ကိုလေးစားမှုရှိလိုပါကသင်ယုံကြည်မှုစနစ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့အတွက်လည်းကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုပါ။
Leo Compatibility - မီးအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lions သည်အခြားမီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းများနှင့်ကောင်းစွာနီးစပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်တော့သူတို့ဟာ Sagittarius အတွက်ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ၀ ိညာဉ်ကင်းမဲ့ပြီးအနည်းငယ်ရိုင်းသော Zodiac သင်္ကေတသည် Zodiac သည်ဤတော်ဝင်ရာသီခွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုသိသည်။
ထို့အပြင်လီယို၏စွန့်စားခန်းသည် Sagittarius ၏ရှေ့မှောက်၌စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဒါဟာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဇာတ်လမ်းပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, လီယိုသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုဂရုစိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Sagittarius သဘာဝဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ဘယ်တော့မှအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်လီယိုသည် Aries နှင့်အလားတူပြproblemနာရှိနိုင်သည်။ တူညီသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူတစ် ဦး ဦး နှင့်အတူရှိနေခြင်းသည်ကြီးမြတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်လီယိုသည်ဆက်ဆံရေးတွင်အများဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဒီနှစ်ခုမှအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ ပြီးနောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။
ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်ဒိုင်းနမစ်သည် Taurus တွင်အလွန်ဆင်တူသည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများသည်လီယို - တာရယ်စ်၏စာပေးစာယူကိုအလွန်မသတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည်မတူညီသောဒြပ်စင်များနှင့်လီယိုသည်ကမ္ဘာမြေ၏နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Virgo နှင့် Capricorn တို့ပင်လီယိုကိုတရားစီရင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
watermarks များအနက်ခြင်္သေ့များသည် Scorpios နှင့်ယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှရမှတ်ရှိသည်။ အကယ်၍ လူနှစ် ဦး သည်ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုရှာတွေ့ပါက၎င်းတို့သည်ပါဝါဇနီးမောင်နှံဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီအမြဲတမ်းအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ကင်ဆာသည်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်စိတ်မ ၀ င်စားသော်လည်း Pisces သည်လီယိုနှင့်အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ဒီအမှတ်အသားနှစ်ခုဟာသူတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးဆင်တူတယ်။ ဒါကြောင့်ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး အကြားနှောင်ကြိုးမှကြွလာသောအခါအနုပညာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
မီးနှင့်ရေနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ သို့သော်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသူတို့တွေ့ရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များစွာ၏အဆိုအရလီယို၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာများသောအားဖြင့် Gemini သို့မဟုတ် Libra ဖြစ်သည်။ အမွှာနှစ်ယောက်သည်လီယိုစိတ်ဝင်စားရန်မည်သို့မည်ပုံအတိအကျသိသည်။ Libra ကျက်သရေသည်သူတို့နှင့် Leo ကိုသွေးဆောင်ရန်လုံလောက်သည်။
အဖြစ်ဝေးလိုက်ဖက်တဲ့တတ်သကဲ့သို့, လီယိုရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု Aquarius နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် Aquarius ရုံလီယိုအဘို့အလွန်းလွတ်လပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာသမားရိုးကျမဟုတ်ကြဘူး။ လီယိုလွှမ်းမိုးလိုတဲ့အချိန်မှာလက်ထိပ်ခတ်တာကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါကသူတို့နောက်ကလိုက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။
ထိုအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လီယိုကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်မနှစ်သက်ရာများကိုပိုမိုပြောဆိုရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ လီယိုသို့ချဉ်းကပ်သောအခါဤလက္ခဏာသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်ကြောင်များသည်ခြင်္သေ့၏အရေပြားတွင်ကြောင်များဖြစ်သည်။ အာရုံစိုက်မှုကိုနှစ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံချင်တယ်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားကြောင်များကဲ့သို့ပင် ကြောင်ပိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်းကြောင်ကိုသင်ကြက်လိုက်တဲ့အခါမှာပိုဆိုးသွားတာပေါ့။
အကယ်၍ သင်ကမှားယွင်းသောလမ်းကိုပွတ်လိုက်လျှင်၎င်း၏ခြေသည်းများပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဤမီးတောက်နှင့်အတူသတိထားဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ခြင်္သေ့များလည်းအထိခိုက်ခံနိုင်ပြီးသတိမထားမိလျှင်စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အုပ်စုများကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဟန်ဆောင်ခြင်းကသူတို့ကိုမထိခိုက်စေပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးပင်ဆိုးရွားနိုင်သည်။ ဒီစရိုက်ကသူတို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေတယ်။
ဒီရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့သတိရပါ။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကကလေးဆန်သေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကြင်နာတတ်တယ်၊ သစ္စာရှိတယ်။ မင်းခြင်္သေ့လား တစ်ခုလား အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင့်ထံမှကြားနာလိုပါသည်။
ငါတို့နောက်ဆောင်းပါးအတွက်ညှိထားပါနေ, ငါတို့က Zodiac ၏ပါမောက္ခ, Virgo အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
လီယိုနှင့်လစ်ဘရာတို့သည်ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ပြီး Libra သည်လီယို၏အကောင်းဆုံးသောပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဟာအကောင်းမြင်၊ ဖန်တီးမှု၊ အလွန်လူမှုရေး၊ အသွင်အပြင်အသွင်အပြင်များနှင့်လူတွေကိုဝိုင်းရံထားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
တစ် ဦး က complimentary Balance
ကဗျာနှင့်လီယိုအတူတူနေ့တိုင်းမှော်ပေမယ့်လည်းတန်ဖိုးရှိရှိစေနိုင်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးသည်ထိရောက်မှုရှိရန်နှင့်သူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှမြင်သာထင်သာသောဆုကျေးဇူးများကိုမြင်တွေ့လိုသည်။လီယိုဟာသအစွန်းကိုချွတ်ယူအပျိုကညာလေးနက်သောသဘာဝ, နေစဉ်ကဗျာခြင်္သေ့သည်သူသို့မဟုတ်သူမလိုချင်သောအရာများကိုရရှိရန်သည်းခံခြင်း၏တန်ဖိုးကိုပြသည်။၁၃ ။ 2019 ။
ကင်ဆာနှင့်လီယိုနှစ်ခုလုံးရှိသည်ပျော့ပျောင်းသောသဘောထားနှင့်တည်မြဲသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလိုချင်သောစိတ်ရှိခြင်း။ ဤရွေ့ကားနှစ်ခုတို့သည်ရာသီခွင်ဘီးပေါ်ရှိအိမ်နီးချင်းများ ဖြစ်၍ သူတို့၏နေ၏အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်တူညီသောmာစွမ်းအင်များစွာကိုမျှဝေသုံးစွဲကြသည်။လီယိုရင်ခုန်စရာအမူအရာကြိုက်တယ်နှင့်ကင်ဆာစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုဘယ်လိုပြရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။၃၀ 2018 ။
ပေါင်းသင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်,Leosသူတို့ကိုယ်သူတို့အညီအမျှပြိုးပြိုးပြက်ပြက် Gemini မှရေးဆွဲရှာပါ။ 'ဒီစုံတွဲကဒရာမာကိုကြိုက်တယ်။ ဒီနှစ်ခုလုံးကဆက်ပြီးဆက်နေနိုင်တယ်' ဟု Barretta ကဆိုသည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းကြာရှည်မခံပါဘူး၊ဆွဲဆောင်သည်ပြင်းထန်ဆဲဖြစ်သည်။၂၅ ။ 2019 ။
Leosနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားလာပြီးသူတို့ချိန်းတွေ့တဲ့သူဟာဒီရာသီခွင်အမှတ်အသားအောက်မှာမွေးဖွားလာတာကိုသိရသောအခါတုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားတယ်။လီယိုခြင်္သေ့ကကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဒီနိမိတ်လက္ခဏာကလူတွေဟာသတ္တဝါတွေလိုပဲဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်၊ ဒါကြောင့်လူတွေဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီလိုမခံစားရဘူးဆိုတာကိုသူတို့မသိနိုင်ကြဘူး။18 2021 ။
လူတိုင်းသည်ဖော်ပြသူကိုချစ်ကြသည်။Leosပြင်းထန်ပြီးလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောချစ်သူများနှင့်ဘဝမိတ်ဖက်များဖြစ်စေသည်။Leosသူတို့ဟာသူတို့လုပ်သမျှအားလုံးမှာအသည်းအသန်ရှိကြတယ်၊ ဒါကတခြားသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အပြင်ပန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုသည်။၂ ။ 2020 ။
သြဂုတ်လတွင်လီယိုအတွက် horoscopes တွေကဘာတွေလဲ။
လီယို (ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် - သြဂုတ် ၂၂) လီယိုသည်၎င်းတို့၏မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှောင့်နှေးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ဇွဲရှိခြင်း၏အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်သင်၏ရှည်လျားသောကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ မအောင်မြင်သောအိပ်မက်များနှင့်ခက်ခဲသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတို့၏အမှိုက်များကိုရှင်းပစ်ပါ။
ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်သြဂုတ်လဟောကိန်းများ။ ၁ Aries (မတ်လ ၂၁ - 19ပြီ ၁၉) ၂ Taurus (20ပြီ ၂၀ မှမေ ၂၀) ၃ Gemini (မေ ၂၁ - ဇွန် ၂၀) ၄ ကင်ဆာ (ဇွန် ၂၁ - ဇူလိုင် ၂၂) ၅ လီယို (ဇူလိုင် ၂၃ မှသြဂုတ်လ ၂၂) နောက်ထပ်ပစ္စည်းများ
သြဂုတ်လတွင်ကျွန်ုပ်၏ horoscope အတွက်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
နားထောင်သူကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုခံရန်သဘောတူသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားမီး (Leo, Sag, Aries) နှင့်လေကြောင်းသင်္ကေတများ (Gemini, Libra, Aquarius) အချို့အတွက်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ခံစားရနေသည့်အရာကိုပိုမိုသိရှိရန်ကူညီရန်ကယ်လီဖိုးနီးယားပန်းပွင့်အနှစ်သာရလိုင်းမှ Calendula * ကိုယူပါ။